Songandina Archives - Page 1023 sur 1062 -
Torkia-Madagasikara : HIFANOHANA EO AMIN’NY SEHATRY NY TOEKARENA
24/01/2017 admintriatra 0
Miroborobo ny fanohanana. Araka ny efa fantatra mantsy, ankoatra ny fahatongavan’ny filoham-pirenena tiorka, Recep Tayyip Erdogan, anio eto Madagasikara mantsy dia ho avy eto amintsika ihany koa ireo mpandraharaha ara-toekarena Tiorka miisa 150. Araka ny …Tohiny
Minisitra Rivo Rakotovao : LOHALAHARANA AMIN’NY FAMPANDROSOANA NY HVM
Tsy ampihambahambana mihitsy no nanambaran’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara na HVM tamin’ny filazana fa lohalaharana hatrany izy ireo amin’ny fanentanana ho amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Noporofoin’ny filoha nasionalin’ity antoko manohana ny fitondrana ity, …Tohiny
Ivato : MPIVADY SYRIANA NAHATRARANA VOLAMENA 18 KG
Volamena milanja 18 kilao indray no tra-tehaky ny fadin-tseranana ny sabotsy lasa teo. Mpivady ireto tra-tehaka saika hitondra an-tsokosoko volamena. Raha ny fantatra nandritra ny fanadihadiana natao dia teratany syriana ilay lehilahy, ary Malagasy kosa …Tohiny
Tetikasan’ny Filoham-pirenena : NAHAZO “GAZON SYNTHETIQUE” NY STADIUM BARIKADIMY
Tafiditra ao anatin’ny politikan’ny fitondram-panjakana ny fanakakaizana hatrany ny vahoaka . Nanolotra bozaka aritifisialy na “gazon synthétique” ho an’ny kianjaben’i Barikadimy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho fanampin’ireo fotodrafitr’asa maro efa vita tao Toamasina. Anisan’ny nanamarika …Tohiny
« 1 … 1 021 1 022 1 023 1 024 1 025 … 1 062 »
Azo lazaina fa efa tomombana ankehitriny ny fametrahana ireo fotodrafitrasa hijerena ny fampandrosoana amin’ny ampitso, tahaka izany ny lalana sy ny lafin’ny angovo sy ireo fotodrafitrasa hafa mifandraika amin’izany hoy ny filoham-pirenena nandritra ny fandaharana ...Tohiny